DOWNLOAD DXGI.DLL FAỊLỤ - DLL - 2020
Ọtụtụ mgbe, e nwere njehie nke ụdị "Dxgi.dll faịlụ adịghị achọta". Ihe kpatara na njehie nke njehie a dabeere na sistemụ sistemụ arụnyere na kọmputa. Ọ bụrụ na ị hụ ozi yiri na Windows XP - ma eleghị anya, ị na-agbalị ịmalite egwuregwu na-achọ DirectX 11, nke anaghị akwado OS a. Na Windows Vista na mgbe e mesịrị, njehie dị otú ahụ dị mkpa imelite ọtụtụ components software - ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ Direct X.
Ụzọ nke mkpochapụ nke ọdịda na dxgi.dll
Nke mbụ, anyị na-achọpụta na enweghị ike merie njehie a na Windows XP, naanị nrụnye nke Windows ọhụrụ ga-enyere aka! Ọ bụrụ na ị na-enweta ọdịda naanị n'ụdị nsụgharị ọhụrụ nke Redmond os, mgbe ahụ, ị ​​ga-agbalị imelite DirectX, ma ọ bụrụ na nke ahụ enyereghị aka, mgbe ahụ, ọkwọ ụgbọala ndịna-ese.
Nzọụkwụ 1: Wụnye ụdị nke DirectX
Otu n'ime njirimara nke kachasị ọhụrụ nke Direct X (n'oge ederede isiokwu a bụ DirectX 12) bụ enweghị ụlọ akwụkwọ ụfọdụ na ngwugwu, gụnyere dxgi.dll. Ọ gaghị ekwe omume ịwụnye ihe na-efu site na ihe ntanetịime weebụ, ị ghaghị iji nkwụnye nkwụnye onwe ya, njikọ ahụ nke e depụtara n'okpuru ebe a.
Download DirectX Ultimate User Runtimes
Ịmalite ịmepụta ihe na-ewepu onwe gị, buru ụzọ kweta nkwekọrịta ikike.
Na windo na-esote, họrọ nchekwa ebe a ga-amịpụta ụlọ akwụkwọ na ntinye.
Mgbe usoro mmeghe ahụ meghere, meghee "Explorer" wee gaa na nchekwa nke edere faịlụ ndị ahụ.
Chọta faịlụ n'ime ndekọ DXSETUP.exe ma mee ya.
Nabata nkwekọrịta ikike ma malite usoro nrụnye site na ịpị "Na-esote".
Ọ bụrụ na enweghi ọdịda, onye nkwụnye ahụ ga-akpọsa ọkwa ọrụ ahụ nke ọma.
Iji dozie nsonaazụ, malitegharịa kọmputa ahụ.
Maka ọrụ Windows 10. Mgbe ọ bụla melite nke usoro OS, usoro usoro nhazi End XML ga-abụ ugboro ugboro.
Ọ bụrụ na usoro a enyereghị gị aka, gaa na-esote.
Usoro 2: Wụnye ndị ọkwọ ụgbọala kachasị ọhụrụ
O nwekwara ike ime na DLL niile dị mkpa maka ọrụ egwuregwu dị, ma a ka na-ahụ njehie ahụ. Nke bụ eziokwu bụ na ndị mmepe nke ọkwọ ụgbọala maka kaadị vidiyo nke ị na-eji ma eleghị anya emehiewo na nhazi software ahụ ugbu a, bụ nke ngwanrọ na-enweghị ike ịmata akwụkwọ ọgụgụ maka DirectX. A na-emezigharị mmejọ ndị ahụ n'oge na-adịghị anya, n'ihi ya, ọ bụ ihe ezi uche dị na ịwụnye ụdị ọkwọ ụgbọala kacha ọhụrụ. Na nchara, ị nwere ike ịnwale beta.
Ụzọ kachasị mfe iji melite bụ iji ngwa pụrụ iche, ntụziaka maka ịrụ ọrụ na nke a kọwara na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala na NVIDIA GeForce Ahụmahụ
Mmetụta ndị a na-enye ohere maka ịme nchọpụta nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na e mepụtara na dọdgi.dll ọbá akwụkwọ.